Hawaasni mana barumsaa Iowa gabaasa corona virus torbaan kana irrati hojattoota keessa namni tokko k | KWIT
Oromo News 01.08.21
Governor Iowa Kim Reynolds sport fi bakka bashaannanaa irrati lakkoofsa muraasni kan kaahame ture har’a kan sute yoo tau, kunis kan kayameeguyyaa gaafa namni 59 sababa Corona virus du’aniidha. Namni tokkoo Woodbury County keessa dabalatee. Akka dhukubichi kun jalqabee namni due 172 dha.
Governor Nebraska Pete Rickets akka jedhetti yeroo jalqabaati namni yeroo jalqaabaf October keessati namni hospitaala jiru 500 dha.
Oduu conference ganamaa kana irrati Rickets akka jedhetti ummani ammalee of eegannoo gochuu akka qaban hime.
Governor sireedhan hospitaala 30%, ICU fi 74% ventilators akka jiru hime.